Maalinta: Meey 3, 2020
18.04.2020-ka gobol ee magaalooyinka waaweyn ka kala ah (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskisehir, [More ...]
Agaasinka guud ee TCDD Tasimacilik wuxuu sii wadaa inuu ku wareejiyo badeecada isagoo leh awood sare inta lagu jiro mudada ganacsiga shisheeye uu si xun u saameeyay Covid-19. Waqtigii ugu dheeraa uguna dheeraa ilaa iyo maanta tan iyo khadka Baku-Tbilisi-Kars wuxuu shaqeynayey bishii la soo dhaafay. [More ...]
Awooda Wadada Tareenka ee Samsun Sivas ayaa Kordhin doonta 50 Boqolkiiba
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu wuxuu sheegay in shaqooyinka ka socda khadka tareenka ee Samsun-Sivas, oo loo xiray dayactir iyo casriyeyn, ay soo gabagabowday 29 Sebtember 2015. Dhismuhu wuxuu bilaabmay sanadihii ugu horreeyay Jamhuuriyadda iyo [More ...]
Isku qurxiyo iskuulada iyo xad dhaafka ah ee Ankara
In kasta oo Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara ay sii waddo howlaheeda kaabayaasha, waxay sidoo kale sii wadaysaa shaqooyinka qurxinta magaalada oo mudnaanta koowaad siiya bilicsanaanta magaalada. Meelaha laga gudbayo ee u baahan dayactirka, dayactirka iyo rinjiyeynta xarumaha iyo degmooyinka [More ...]
In kasta oo dadka deggan Konya ay guryahooda ku jiraan, shaqada qabanqaabada ayaa wali ka socota isgoysyada mashquulka ah
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso isgoysyada iyo wadooyinka maalmaha bandowga. Dhameystirka qabanqaabada wadooyinka badan ee xanibaada bandoow usbuucyadii la soo dhaafay si loo yareeyo isu socodka magaalada. [More ...]
Asphalt waxaa la dhigay isgoyska Isgoyska Izmit Seka
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo hirgalisay mashruucyo badan oo gaadiid oo muhiim ah 16kii sano ee la soo dhaafay, ayaa gaadiidku ka dhigaysa kuwa raaxo badan wadooyinka, isgoysyada iyo meelo kale oo badan. Waaxda Sayniska ee degmada Izmit [More ...]
Khadka Tooska ah ee Takhtarka wuxuu sii wadaa inuu ogeysiiyo dadka aqoonta u leh
Khadka La-tashiga Dhakhtarka, oo ay u xilsaaratay Degmooyinka Izmir Metropolitan County si looga hortago cufnaanta isbitaallada iyo hagidda dadka ay ku adag tahay inay la xiriiraan takhtar, waxay sii wadaan inay la socodsiiyaan dadka Izmir. Deganeyaasha Izmir way ku qanacsan yihiin dalabka. Magaalaga Izmir [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa yidhi, "Dabcan waxa jiri doona dhawr toddobaad oo ciyaar ah, laakiin hadda wax turjumad ah kuma lahan qorshaha ugu wayn. saaxiibada Our dhamaadka group Turkey ee shaqada Baabuurta Initiative [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Karaismailoğlu Fair, taas oo ah mid ka mid ah line ugu horeysay Turkey ee tareenka iyo ka dib 1932 sano oo adeega khadka tareenka Samsun-Sivas qaro furay in 83 oo casriyaynaysa September 29, 2015 [More ...]
Qalabka neefsashada ee degdegga ah ee maxalliga ah, oo ay soo saareen Baykar, Biosys, Arçelik iyo Aselsan iyagoo kaashanaya Wasaaradda Caafimaadka, isuduwidda Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada, waxayna ka heshay summad buuxda dhakhaatiirta kadib tijaabinta guusha. [More ...]
Iyada oo ay leedahay shirkadda cusub ee loo yaqaan 'UVH-170 diyaaradda xamuulka qaada ee xamuulka qaada ee xamuulka ah, UAVOS waa waddo iswada oo otomaatig ah laga bilaabo iibiyaha ugu horreeya ee tagaya iyada oo la adeegsanayo waddooyinka horay loo soo xushay, ka dibna dib uga soo laabto halka loo socdo iibiyaha iyada oo la adeegsanayo isla wadadii. [More ...]
Ciidamada Badda Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay si firfircoon uga qeybqaadan doonaan jimicsiga 27-aad ee Jimicsiga Baasifiga (RIMPAC), laakiin jimicsiga sanadkan, oo la qaban doono laga bilaabo 17-ka illaa 31-ka Agoosto, ayaa loo fulin doonaa si ka yar sidii hore sababtoo ah cudurka loo yaqaan 'coronavirus'. US [More ...]
Qalab badan oo Daawooyin Caafimaad oo Lagu Xiray Magaalada Istanbul
Hawlgalkii ay fuliyeen kooxdii fulinaysay Wasaaradda Kastammada Ganacsiyada ee Magaalada Istanbul Muratbey Kastamka, 760 kun oo maaskaro ah, 1 milyan 310 kun oo galoofis ah iyo 8 200 [More ...]
Heshiiskii udhaxeeya Ajanabiga Duulista Hawada iyo Boeing waa la joojiyay
Heshiiskii u dhexeeyey kooxaha duulista hawada, American Boeing iyo Brazil Embraer, si ay u sameeyaan iskaashi ganacsi ayaa lagu joojiyey go'aanka Boeing. American Boeing oo ay weheliso shirkadda 'Embraer Brazil', oo ah shirkadda saddexaad ee ugu sareysa diyaaradaha adduunka [More ...]
Wasaaradda Waxbarashada Qaranka ayaa sheegtay in 19990 macallimiin la shaqaaleysiin doono ay u shaqeyn doonaan sidii macallimiin qandaraas la galay oo ka tirsan Wasaaradda si ay uga shaqeeyaan laamo iyo gobollo kala duwan. Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee Lambarka 657, Lambarka 652 [More ...]
Isgoyska Mahmutbey ee Magaalada Istanbul waxaa dib u cusboonaysiisay Wasaaradda
Bayaanka uu soo saaray Agaasimaha Guud ee Wadooyinka ee xiriirka la leh Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, waxaa lagu tilmaamay inay jiraan gaadiid aad u culus Wadada TEM iyo wadooyinka isku xira Isgoyska Kavacık Junction-Mahmutbey West Junction-Kınalı Junction. [More ...]
Cusbitaal ayaa la dhigay 2-da Bilyan ee Runway ee Madaarka Atatürk ..!
Dhismaha Isbitaalka Yeşilköy, oo laga dhisayo laba wado oo garoonka diyaaradaha Ataturk xiran, oo ku kacaya 2 bilyan oo doollar, ayaa wali socda. "Waxay burburiyeen dhibco istiraatiiji ah oo muhiim ah," ayuu yiri CHP's Karabat. Sida uu sheegayo weriye Yuusuf Demir oo ka socda SÖZCÜ; [More ...]
Wadadu waxay xirnaan doontaa inta ay gaarsiisan tahay Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Marxaladda 3aad ee Meltem
Marka la eego baaxadda Mashruuca Nidaamka Tareenka ee Heerka 3aad ee Antalya Dawladda Hoose, qaybta Meltem Boulevard ee u dhaxaysa İsmail Baha Sürelsan Avenue iyo Tarık Akıltopu Avenue ayaa loo xiri doonaa taraafikada Isniinta, Meey 4. Meltem Boulevard [More ...]
Suuska Cunnada Markii Tareenka Xamuulku Uu Ka Baxo Van Iiraan Sideed Maalmood! Kuxigeenka Xeer Ilaaliyaha Magaalada Istanbul Mahmut Tanal ayaa la wadaagay fiidiyow ku saabsan gaadiidka xamuulka qaada ee TCDD isaga oo adeegsanaya akoonkiisa Twitter. TCDD fiidiyowga la wadaago [More ...]
Dadka daggan Istanbul waxay sii wadaan howlahooda wadada IMM inta ay guriga joogaan
İBB waxay sii wadaysaa dadaalkeeda si ay u xasiliso gaadiidka iyadoo ku xireysa Giyimkent Avenue iyo TEM Yanyo. 86% iibsiga qodista ayaa lagu dhammeystirey wadada isku xirta iyo isgoyska. Kooxaha IMM-da ee ka faa'iideysanaya bandoowga dartiis baaxad weyn awgeed [More ...]
Covid 19 Dillaaca iyo Gaadiidka xamuulka qaada
Dalkeena, kaliya 4 boqolkiiba wadarta gaadiidka xamuulka ayaa lagu sameeyaa tareenka. Waxaa iska cad in saamaynta cudurrada faafa ee dalal shisheeye ay ku badan tahay fidinta cudurradan. Maaddaama aysan wali jirin waddo-tareenno dekedo badan ah, ayaa xamuullada ku soo socda dekedahayaga, [More ...]
Serap Timur waxaa loo magacaabay Agaasimeyaasha Mashaariicda Nidaamka Rareenka Nidaamka ee IMM
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul waxay u magacowday Serap Timur, oo u soo noqday kuxigeenka maareeyaha gobolka ee DLH, halka uu bedelay Aslı Şahin Akyol, maareeyaha Mashaariicda Rail System Rail, kaasoo uu dhawaan shaqada ka eryay. ee la soo dhaafay [More ...]
Maanta Taariikhda: 3 May 1873 Haydarpaşa-Izmit tareen
Maanta oo ah Taariikhda 3 Meey 1873 Haydarpaşa-Izmit train-ga ayaa adeeg ka galay Izmit iyadoo xafladda ay Grand Vizier Rüştü Pasha diyaar u ahayd. Qadka 91-km waxaa la dhisay 2 sano gudahood. 3 Meey 1946 aasaaskii khadka isku xirka Maraş-Köprüağzı [More ...]